रोनाल्डोको ह्याट्रिकमा पोर्चुगलको जित, विश्वकप सम्भावना कति ? Canada Nepal
रोनाल्डोको ह्याट्रिकमा पोर्चुगलको जित, विश्वकप सम्भावना कति ?
काठमाडौं - कतार विश्वकप तथा युरोपियन छनोटमा स्टार खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोको ह्याट्रिक मद्दतमा पोर्चुगलले लग्सम्बर्गमाथि फराकिलो जित निकालेको छ ।
खेलको आठौं मिनेटमा रोनाल्डोले पेनाल्टीबाट गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए । १३औं मिनेटमा पोर्चुगलले अर्को पेनाल्टी पायो । जसलाई रोनाल्डोले नै गोल परिणत गरे ।
१७औं मिनेटमा फर्नान्डेसले गोल गर्दै टिमलाई ३-० को अग्रता बनाए । पोर्चुगलले ६९औं मिनेटमा जाओओको गोलमा चौथो गोल गर्‍यो । ८७औं मिनेटमा रोनाल्डोले गोल गर्दै ब्यक्तिगत ह्याट्रिक तथा टोलीको लागि पाचौं गोल गरे ।
यो जितपछि पोर्चुगलले विश्वकपमा स्थान बनाउने सम्भावना कायमै राखेको छ । उसको ६ खेलमा १६ अंक भएको छ ।सोही समूहको अर्को खेलमा सर्वियाले अजरबैजानलाई ३-१ गोलले हरायो । यो जितपछि सर्विया पोर्चुगललाई पछि पार्दे शीर्ष स्थानमा उक्लन सफल भयो ।न्युज कारखाना
आश्विन २७, २०७८ बुधवार ०७:२८:०४ बजे : प्रकाशित
# युरोपियन छनोट